“ ပုဂံမှ QR ကုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ လူအရောက် အပေါက်နည်းပြီး ထူးခြားသော နေရာတစ်ခု ” – Amara News
“ ပုဂံမှ QR ကုတ် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ လူအရောက် အပေါက်နည်းပြီး ထူးခြားသော နေရာတစ်ခု ”
လူအရောက် အပေါက်နည်းတဲ့ ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခု ရေကန်လိုလို ဘာလိုလို ကျောက်တုံးကြီး တစ်ခုကို ထွင်းထားတာ တစ်ဖက်မှာ တော့ ပုဂံခေတ်က အုတ်တွေလို ပဲ ရှေ့ဟောင်း အုတ်တွေ တွေ့ရတယ် ထူးဆန်းနေတာက ဒီကျောက်တုံး ပေါ်မှာ ဘယ်သူထွင်းထု ခဲ့တာလဲ မသိတဲ့ QR Code ပုံစံလိုလို
အလယ်မှာကတော့ နာဇီ logo နဲ့ လည်းတူသလိုလို ဘယ်သူတွေက ဒါကိုဘာအတွက်လုပ်ထားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူးဗျာ လုပ်ထားတာ ကတော့သေသေသပ်သပ်ပဲ တချို့နေရာလေးတွေကတော့ ပျက်စီးနေပြီဝင်္ကဘာ ပတ်လမ်းလား ဘာလား ? ဒီဘက် ခေတ်မှ ဒါကို ထွင်းထားတာ မဟုတ်တာတော့ သေချာလောက်တယ် အားအားယားယား ဘယ်သူကမှာ ဒီတောင်ပေါ်ကို တက်ပြီး လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး
Alien လုပ်ခဲ့တာလား အရင် ဒီနေရာက ဘာကြီးလဲ ?ဓမ္မရံကြီး ဘုရားတောင် Egypt က ပိရစ်မစ်တွေ နဲ့ ပုံစံတူလို့အလောင်စည်သူမင်း စီးခဲ့တဲ့ ဖောင်စကြာယာဉ် က UFO လို့ပြောတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ နာဆာအဖွဲ့အစည်းထံမှ လျိုဝှက်စွာပေါက်ကြားလာတဲ့ဓါတ်ပုံ များထဲ မှာ ဓမ္မံရံကြီးဘုရားဓါတ်ပုံပါဝင်တယ်ဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ် ပုဂံ ဘုရားတွေ ပေါ်မှာ UFO ပျံဝဲတယ် ဘာတယ် ဆိုတာကတော့ ယုံတမ်းစကားလား ဘာလား သေချာမသိဘူး
Egypt မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ရှေ့ဟောင်း ရုပ်ထု လေးလဲ အောက်ဆုံးမှာပြထားတယ် ကျွန်တော်တို့တွေ အခုသုံးနေတဲ့ QR Code ဆိုတာအဲ့ ရုပ်ထုကနေ ပုံစံကို copy ယူထားတာလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။အခုဒါက ဘာမှန်တော့ မသိဘူး စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ဒီနေရာကို ကျွန်တော်သိတာကတော့ ကြာနေပြီ တချို့လူတွေလဲဒီနေရာကို သွားတယ် ဓာတ်ပုံရိုက်ကျတယ် လူသိတော့ နည်းတယ်။
ဒီနေရာက တုရင်တောင် ဘုရားကြီး ရဲ့ တောင်ဘက်မှာ ရှိပါတယ်Google ကနေလဲ နေရာကိုပြထားပါတယ်နော်။ပုဂံရောက်လို့ စိတ်ဝင်စားရင်တော့ သွားကြည့်ပါ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဆိုပို အဆင်ပြေပါတယ်။
“ ပုဂံမှ QR ကုတျ ပုံသဏ်ဍာနျရှိတဲ့ လူအရောကျ အပေါကျနညျးပွီး ထူးခွားသော နရောတဈခု ”
လူအရောကျ အပေါကျနညျးတဲ့ ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ နရော တဈခု ရကေနျလိုလို ဘာလိုလို ကြောကျတုံးကွီး တဈခုကို ထှငျးထားတာ တဈဖကျမှာ တော့ ပုဂံခတျေက အုတျတှလေို ပဲ ရှဟေ့ောငျး အုတျတှေ တှရေ့တယျ ထူးဆနျးနတောက ဒီကြောကျတုံး ပျေါမှာ ဘယျသူထှငျးထု ခဲ့တာလဲ မသိတဲ့ QR Code ပုံစံလိုလို
အလယျမှာကတော့ နာဇီ logo နဲ့ လညျးတူသလိုလို ဘယျသူတှကေ ဒါကိုဘာအတှကျလုပျထားလဲ ဆိုတာတော့ မသိဘူးဗြာ လုပျထားတာ ကတော့သသေသေပျသပျပဲ တခြို့နရောလေးတှကေတော့ ပကျြစီးနပွေီဝင်ျကဘာ ပတျလမျးလား ဘာလား ? ဒီဘကျ ခတျေမှ ဒါကို ထှငျးထားတာ မဟုတျတာတော့ သခြောလောကျတယျ အားအားယားယား ဘယျသူကမှာ ဒီတောငျပျေါကို တကျပွီး လုပျမှာတော့ မဟုတျဘူးး
Alien လုပျခဲ့တာလား အရငျ ဒီနရောက ဘာကွီးလဲ ?ဓမ်မရံကွီး ဘုရားတောငျ Egypt က ပိရဈမဈတှေ နဲ့ ပုံစံတူလို့အလောငျစညျသူမငျး စီးခဲ့တဲ့ ဖောငျစကွာယာဉျ က UFO လို့ပွောတာတှေ ရှိခဲ့ဖူးတယျဆိုတော့ နာဆာအဖှဲ့အစညျးထံမှ လြိုဝှကျစှာပေါကျကွားလာတဲ့ဓါတျပုံ မြားထဲ မှာ ဓမ်မံရံကွီးဘုရားဓါတျပုံပါဝငျတယျဆိုတာတော့ ဟုတျတယျ ပုဂံ ဘုရားတှေ ပျေါမှာ UFO ပြံဝဲတယျ ဘာတယျ ဆိုတာကတော့ ယုံတမျးစကားလား ဘာလား သခြောမသိဘူး
Egypt မှာ တှခေဲ့တဲ့ရှဟေ့ောငျး ရုပျထု လေးလဲ အောကျဆုံးမှာပွထားတယျ ကြှနျတျောတို့တှေ အခုသုံးနတေဲ့ QR Code ဆိုတာအဲ့ ရုပျထုကနေ ပုံစံကို copy ယူထားတာလို့ ဖတျဖူးပါတယျ။အခုဒါက ဘာမှနျတော့ မသိဘူး စိတျဝငျစားစရာတော့ကောငျးတယျဒီနရောကို ကြှနျတျောသိတာကတော့ ကွာနပွေီ တခြို့လူတှလေဲဒီနရောကို သှားတယျ ဓာတျပုံရိုကျကတြယျ လူသိတော့ နညျးတယျ။
ဒီနရောက တုရငျတောငျ ဘုရားကွီး ရဲ့ တောငျဘကျမှာ ရှိပါတယျGoogle ကနလေဲ နရောကိုပွထားပါတယျနျော။ပုဂံရောကျလို့ စိတျဝငျစားရငျတော့ သှားကွညျ့ပါ ဆိုငျကယျနဲ့ဆိုပို အဆငျပွပေါတယျ။
Previous Article ဒေါ်စုပြောတဲ့ သား ထိန်လင်း လူမိုက်ကြီး အမေ့စကားနားမထောင်လို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးနဲ့ေ-သရတာတဲ့
Next Article ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် အသက်ဘေးကြုံလျှင်၊ မတရား စွတ်စွဲခံ ရလျှင်